teknolojia - Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd.
Mampiasà naoty (kitiho raha te hamaky bebe kokoa)
1.Zahao ny fanoherana ny singa fanafanana karbônika sôlida amin'ny andiany iray ihany alohan'ny hanokafana ny fonosana, apetraho ny fanoherana akaiky indrindra amin'ny dingana iray ihany, izay hahatonga ny hafanan'ny lafaoro hifanaraka kokoa, ny fanoherana hosoratanay amin'ny faritra mangatsiaka.
2.Satria karbônika silikona dia fitaovana mafy sy marefo, aza manandrana manamboatra rehefa apetrakao izy io, ataovy azo alefa araka izay azo atao, midika izany fa azo esorina ary afaka mivoaka aorian'ny fametrahana azy. Ny singa fanafanana karbônika sôlida dia afaka mametraka amin'ny takelaka na fisaka.
3.Ny fifehezana singa fanamafisam-peo silika dia mampiasa ny fifehezana ny thyristor, noho izany dia azo ovaina ny herinaratra, ny hery nomen'ny mpanara-maso dia tokony ho avo 2-3 heny noho ny fahefan'ny lafaoro, noho izany dia manalava ny fiainana ny singa fanafanana karbôna silika, amin'ny fampiasana azy amin'ny fomba tsara kokoa.
4. Misafidiana ny fomba mifehy tariby miankina amin'ny habe sy ny fanoherana ny singa fanafanana karbônika silika.
5.Ny singa fanafanana karbônika vaovao dia tokony hampitombo miadana ny herinaratra amin'ny fizotran'ny fanafanana, hahatonga ny fahasamihafana eo anelanelan'ny hafanana sy ny hafanan'ny lafaoro fatana hafanana, ary noho izany dia manalava ny fiainana ny singa fanafanana karbônika karbôna. ny fampitana herinaratra amin'ireto fomba manaraka ireto: apetraka aloha ny heriny amin'ny 30% -40% amin'ny herin'ny famolavolana hanamboarana 20 minitra -40 minitra, avy eo nitombo ho 60% -70% ny tanjaky ny famolavolana 20 minitra -30 minitra, aorian'ny ny mari-pana ny singa fanafanana silika karbaona sy ny lafaoro dia mifandanja, avy eo ampitomboina miadana ny herinaratra, voarakitra herinaratra sy ankehitriny mandra-pahatongan'ny maripana amin'ny mari-pana tadiavina, io no fampiasana herinaratra sy ankehitriny an'ny singa fanamafisana karbônika sôlida, Ao anatin'ity sokajy ankehitriny ity azo apetraka amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, raha ny fanoherana lasa lehibe hampitombo ny malefaka mety, mba hahatonga ny silicon karbida fanafanana singa ho maintai n hery miorina
6. Aorian'ny fiomanana amin'ny lafaoro, raha ny singa fanafanana karbôna silika dia manamboatra ny latabatra toy izao manaraka izao: Rehefa napetraka ny herin'ny fampitana hanomboka hampiasa 40% herin'ny hery ara-dalàna, hafanana 20 minitra, avy eo ampitomboina ny mari-pana amin'ny hafanana irina mandritra ny 10 minitra ka hatramin'ny 30 minitra, ary apetraho ny fotoana fihazonana.
7.Aza jerena fotsiny ny herinaratra na ny dieny eo am-panaovana ny singa fanafanana karbônika sôlida, satria rehefa mampiasa ny fanoherana ianao dia hihalehibe tsikelikely (ho lehibe kokoa ny herinaratra ary ho kely kokoa ny onja), rehefa tsy miova ny herin'ny fidirana, dia tsy miova ny mari-pana.
8.Raha simba ny singa fanafanana karbôna silika aorian'ny fampiasana volana, aza miova ho an'ny tokana vaovao, miova ho an'ny singa fanafanana karbônika silika ampiasaina, izany dia satria ho lehibe kokoa ny fanoherana rehefa nampiasaina izy io, ny fanoherana ilay vaovao ho kely loatra, raha mampiasa ilay vaovao ianao dia tsy hitovy ny maripana amin'ny singa fanafanana karbônika silika ampiasaina, mba hahafahanao manova ilay efa niasa, izay hahatonga ny fanoherana ireo singa manafana. raha tsy manana ny fanafanana efa niasa ianao singa, azafady mba ovao ireo singa manafana rehetra, ary avy eo ilay azonao ampiasaina dia azonao ovaina rehefa ilainao izany.
9.Ny fanoherana dia ho lehibe kokoa amin'ny fampiasana ny singa fanafanana, raha tsy mety afa-po ny mari-pana rehefa nahatratra ny avo indrindra ny voltatra, azafady ovay ny fifandraisana, toy ny fifandraisana amin'ny andian-dahatsoratra dia afaka miova amin'ny parallèle, ny fifandraisan'ny kintana amin'ny delta connection, ianao tokony hanova ny fifandraisana dia miankina amin'ny mpanara-maso anao.
10.Ny oxide vy sy ny sombin-javatra ary ny zavatra hafa ao anaty lafaoro dia tokony hodiovina ara-potoana, aza atao ao anaty lafaoro izy ireo, raha sendra mampifandray ny singa fanafanana izy ireo mba hanimba azy.
11.Ny fampiasana mitohy dia hanana fiainana lava kokoa noho ny fampiasana tsindraindray.
12.Ny zavatra tianao hohafanaina dia tsy tokony hanana habetsaky ny hamandoana be loatra, mba hisorohana ny fandoroana ny singa fanafanana, miezaha tsy hifandray mivantana amin'ireo akora alkaly.
13.Ny maripanan'ny elastika fanamafisam-peo silika dia tsy tokony hihoatra ny 1550 ℃.
Coating (kitiho raha te hamaky bebe kokoa)
SICTECH Ny singa fanafanana karbôna silika dia karazana horonantsary sentetika, izay manarona ny velaran'ny faritra mafana aorian'ny famokarana singa fanamainana karbônika sôlida, afaka manitatra ny ain'ny singa fanamainana karbônika sôlida amin'ny tontolo iainana manokana, azo sarahina amin'ny gazy hanafainganana ny fahanteran'ny singa fanafanana karbônika sôlida, hiarovana ny singa fanafanana karbônika silika, raha mila tsipiriany misimisy kokoa amin'ny firakotra, azafady jereo ity fampidirana manaraka ity:
1. T coating: io firakotra io dia ampiasaina ho an'ny tahan'ny okididra ambany amin'ny fampiasana mahazatra, ataovy izay hanitarana ny sanganasan'ny karbida karbôna sida amin'ny 30-60%.
2. Fitaovana D: io coating io dia ampiasaina raha misy azota
3. S manarona: io firakotra io dia mampiasa tsorakazo telo (elatra W fanamafisam-peo karbôna gazy) fitaratra mitsingevana
4. Q fonosana: io firakotra io dia ampiasaina raha misy etona na hidrogen
rivotra iainana Effect Countermeasure Palitao voatondro
zavona Ny androm-piainan'i Heater indraindray dia tapaka hatramin'ny latsaka ny ampahadimin'ny androm-piainana andrasana amin'ny toetr'andro malalaka. Zava-dehibe ny fampiakarana ny mari-pana aorian'ny fanadiovana ny hamandoana ampy amin'ny mari-pana ambany rehefa manomboka lafaoro vaovao na manomboka mampiasa iray aorian'ny fampiatoana lava. Q palitao
Entona hidrogen mitombo haingana ny fanoherana ary mihasimba haingana ny tanjaky ny mekanika raha mihoatra ny 1350 ° C ny mari-pana amin'ny atmosfera entona hidrôzenina. Ny ain'ny serivisy anefa dia miankina betsaka amin'ny hamafin'ny hamandoan'ny entona. Soso-kevitra ny hampiasana azy amin'ny mari-pana latsaky ny 1300 ° C ao amin'ny efi-tranon'ny memy. Soso-kevitra ny tokony hampihenana ny enta-mavesatra araka izay tratra. (5W / cm2)
Entona nitroka Ny entona nitroka dia mihetsika miaraka amin'ny karbônika silikika, mamorona sidaida nitroka rehefa mihoatra ny 1400 ° C ny mari-pana, ary mampihena ny ain'ny serivisy izany. Raha ny hamandoana dia mitovy amin'ny an'ny hidrogen. Soso-kevitra ny hampiasana azy amin'ny mari-pana latsaky ny 1300 ° C ao amin'ny efi-tranon'ny memy. Soso-kevitra ny tokony hampihenana ny enta-mavesatra araka izay tratra. (5W / cm2)。 D palitao
Entona niova amoniaka (H275%) 、 (N225%) Izy io dia mitovy amin'ny tranga amin'ny gazy hidrogen sy gazy azota. Soso-kevitra ny hampiasana azy amin'ny mari-pana latsaky ny 1300 ° C ao amin'ny efi-tranon'ny memy. Tolo-kevitra ny hampihena ny enta-mavesatra araka izay tratra. D palitao
Entona fanehoan-kevitra momba ny fanapahana (N2 、 CO 、 CO2 、 H2 、 CH2etc.) Ny hydrocarbon decomposed dia miraikitra amin'ny sehatry ny singa fanafanana ary mety hiteraka fitetezana fohy ao anaty atmosfera ao anatin'izany ny hydrocarbon. Ilaina ny mandoro karbonina amin'ny alàlan'ny fampidirana rivotra any anaty lafaoro. Ny lafaoro mandeha amin'ny herinaratra dia tokony hohaingoina miaraka amin'ny elanelam-potoana misy eo anelanelan'ny singa fanafanana EREMA hisorohana ny fivezivezena fohy. D palitao
Entona solifara (S 、 SO2) Ho simba ny velaran'ny singa fanafanana ary hitombo haingana ny fanoherana raha mihoatra ny 1300 ° C ny mari-pana EREMA. Ampiasao ireo singa fanafanana ambanin'ny 1300 ° C. D palitao
Ny hafa Ireo akora isan-karazany, namboarina avy amin'ny akora namboarina nandritra ny fanaovana kajy, anisan'izany ny halida toy ny firamainty, antimony, alkali ary alkaline tany, ary koa ny oksida, ireo singa simika ao aminy dia mety miraikitra amin'ireo singa fanafanana ary manimba azy ireo. Zava-dehibe ny fanesorana ireo mialoha ireo amin'ny fitaovana namboarina na handrarana azy ireo amin'ny alàlan'ny fametrahana seranan-tsambo. S palitao
Toetra elektrika, fananana simika (kitiho raha te hamaky bebe kokoa)
SICTECH Ny singa fanafanana karbônika karbôna dia matetika iharan'ny tsiranoka miadana, ny fananganana Silica ary ny fitomboan'ny fanoherana herinaratra, izay antsoina hoe fahasimbana mandritra ny fampiasana azy.
Silicon carbide (SiC) dia mihetsika amin'ny oxygen (O2) ao amin'ny habakabaka sy ny ambonin'ireo singa fanafanana miandalana amin'ny oksida, mamorona Silica (SiO2), izay insulator, raha mitombo kosa ny isany. Mampisondrotra ny fanoherana elektrika izany. Ny oksidena dia miseho rehefa mahatratra 800 ° C ny mari-pana ary mihamafaingana rehefa mitombo ny mari-pana. Ny fitrandrahana haingana dia hitranga eo am-piandohan'ny fampiasana azy, saingy hihena tsikelikely ny tahan'ny oksidasiana. ny fetran'ny androm-piainan'ny serivisy dia atolotra ho azy rehefa mitombo hatramin'ny 3 heny ny fanoherana voalohany. (Ny fianan'ny LD sy LS dia maharitra mandra-pahatongan'ny fanoherana hatramin'ny 2 heny amin'ny sandan'ny voalohany). Ny antony dia, nahatratra fiakarana avo telo heny, ny fiovan'ny fanoherana ny singa tsirairay dia nanjary lehibe kokoa ary ny fizarana hafanana isaky ny singa iray dia niharatsy, ka nahatonga ny fizarana mari-pana tsy mahomby tao amin'ny efitrano fatana. ny fiainana, tsy ny fitomboan'ny fanoherana ihany fa ny fiovana amin'ny porosity miseho sy ny fahasimban'ny vaky noho ny fahasimban'ny tanjaka, ka mila mitandrina.